समाचार Archives - Page 177 of 185 - Ilam Aawaj
कतै तपाई‌काे बालबालिका डिटिजल कुलतमा त फस्दै छैनन् ? बालबालिकामा देखिन्कछ यस्तो असर ?
अहिले बालबालिकाहरु हरक्षण मार्टफोनमै रमाउन थालेका छन् । यसले उनीहरुलाई वाह्य संसारबाट अलग गर्दैछ । भर्चुअल संसारमा रमाउने उनीहरुलाई यसबाट छुटाउन टाउको दुखाईको बिषय समेत बन्न थालेको छ । बालबालिका प्रविधिसँग एकाकार हुनु स्वभाविक हो । तर, यसकै लतमा फस्नु सहि होइन । किन ? जब बच्चा सानो हुन्छ, उनीहरुको मस्तिष्क तेज र इन...
योग किन, कसरी र कहिले ? जान्नै पर्ने यी कुरा
अहिले सर्बत्र योगको चर्चा छ । स्वस्थ्य जीवनको लागि योग अपरिहार्य आवश्यक्ता हो । योगले मानिसलाई शारीरिक र मानसिक दुबै रुपमा स्वस्थ्य, तन्दुरुस्त, खुसी र सुखी राख्छ । भनिन्छ, योग सहि तरिकाले जीउने विज्ञान हो । त्यसैले यसलाई दैनिक जीवनमा सामेल गर्नुपर्छ । यसले मानिसको सबै क्षेत्रमा काम गर्छ, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत...
साढे ५ घण्टापछि रिहा भइन् रामकुमारी झाँक्री
इलाम । बिहीबार दिउँसो १ बजे पक्राउ परेकी प्रहरीले नेकपा प्रचण्ड माधव समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई रिहा गरेको छ । उनलाई प्रहरीले साँझ रिहा गरेको हो । महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले रामकुमारीलाई उनका श्रीमानको जिम्मामा रिहा गरिएको बताए । राष्ट्रपतिबारे अभिव्यक्ति दिएकी रामकुमारीला...
तामाको भाँडामा राखिएको पानी, पाउनुहोस् यी चमत्कारीक लाभ
हामीकहाँ प्लाष्टिकको भाँडा, बोत्तलमा भण्डारण गरिएको पानी पिउने गरिएको छ । धेरैजसोको भान्सामा पानी राख्ने भाँडो पनि प्लाष्टिककै हुने गर्छ । तर, प्लाष्टिकको भाँडामा भण्डारण गरिएको पानी विषाक्त हुने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । यसमा हानिकारक रसायन हुने भएकाले त्यसको असर भण्डारण गरेको पानीमा पनि पर्छ । सर्बोत्तम तामा रा...
ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाईकल चालकको मृत्यु, सवारी चाेरी गर्ने २ पक्राउ
सुनसरी।सुनसरीको ईटहरी उप-महानगरपालिका-१७ पकली चोकमा बुधवार दिउँसो ट्रकले मोटरसाईकललाई ठक्कर दिंदा १ जनाको मृत्यु भएको छ । पुर्व पश्चिम राजमार्गमा पुर्वबाट पश्चिम तर्फ जाँदै गरेको को ३८ प ५७५५ नम्बरको मोटरसाईकललाई बिपरीत दिशाबाट जाँदै को १ क ३४११ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिंदा घाईते भएका मोटरसाईकल चालक बेलका नगरपालिका-९...
लाेकसेवाले खुलायाे ५ सय बढी पदमा आवेदन
इलाम।लोक सेवा आयोगले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका लागि पाँच सय बढी पदमा आवेदन मागेको छ। बुधबार गोरखापत्रमा सूचना निकालेर आयोगले खुला र समावेशी प्रतियोगितामार्फत् परीक्षाका लागि इच्छुकहरूबाट आवेदन माग गरेको छ। दरखास्त अनलाइनबाट पनि भर्न सकिन्छ। आयोगले सब-ईञ्जिनियर, कम्...
सुनसरी।सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-५ मा मंगलवार राती मोटरसाईकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ । राती साँढे ७ बजेको समयमा प्रदेश १- ०२-०४३ प ८८२७ नम्बरको मोटरसाईकलले पैदल यात्री बराहक्षेत्र नगरपालिका-४ का ३९ बर्षीय महेन्द्र साहलाई ठक्कर दिंदा घाईते भएका साहको उपचारको क्रममा धरानको बि.पी.कोईराला स्वास्थ्य ब...
बलिउडका यी अभिनेत्री, कसैको भोकले त कसैको गरिबीले मृत्यु
बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीको अप्रत्यासित मृत्युको खबरले सनसनी मच्याएको छ । मृत्यु असामान्य ढंगले भएको थियो । भनिन्थ्यो, साइलेन्ट हार्ट अट्याक्टको कारण उनको मृत्यु भयो । तर, अहिले घटनामा ट्वीस्ट आएको छ । उनको मृत्यु ‘शंकास्पद’ रहेको समेत बताइन्छ । पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनले अल्कोहन सेवन गरेको भेटियो । मदिरा सेवन गरेर ब...
यस्ताे खानपानले तपाईंलाई जीवनभर निरोगी र तन्दुरुस्त राख्छ
कस्ताे खानपानले जीवनभर निरोगी र तन्दुरुस्त राख्छ ? खानासँग हाम्रो सम्बन्ध के छ ? खाना किन खाने ? यावत् प्रश्नले हाम्रो जीवनसँग खास अर्थ राख्छ । तर, हामी बाँचुञ्जेल यस्ता प्रश्नमा घोत्लिदैनौ । किनभने खाना खानु भनेको स्वाद मेट्न मात्र होइन, पेट भर्न मात्र होइन । स्वाद मेट्ने र पेट भर्ने त अर्कै कुरा हुन् । मूलत शरीरलाई ...
चुलाचुलीमा धान भण्डारण गृह निर्माण हुँदै
इलाम। यहाँस्थित चुलाचुली गाउँपालिकामा धान भण्डारण गृह निर्माण भइरहेको छ । किसानलाई धान भण्डारण गर्न सहज बनाउनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रको अगुवाइमा भण्डारण गृह निर्माण थालिएको हो । गत पुसको पहिलो साताबाट निर्माण शुरु भएको भण्डारण गृह यही माघसम्ममा सकिने छ । सञ्चालक समिति चुलाचुली र ज्ञान केन्द्रको ५०।५० प्रतिशत खर्चमा...